Dhageyso:-Somaliland oo Farmaajo ku eedeysay inuu burburiyey heshiis ay la galeen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Soomaaliland ayaa ka hadashay wada-hadallda Dowladda Soomaaliya ay wado in dib loola bilaabo Soomaaliland,kaas oo shirar horudhac u ah lagu qabtay Magaalada muqdisho.
Guddoomiyaha Guddiga u qaabilsan Somaliland wadahadalka dowladda Soomaaliya Adna Aadan Ismaaciil ayaa sheegtay in madaxwaynaha Soomaaliya uu bur buriyay heshiisyadii horay ay u wada galeen labada dhinac .
Waxa ay sheegtay in madaxwaynaha uu muddo sadex sano ah wada-hadalkii socday oo ay soo bilaabeen Madaxdii ka horeysay uusan dib u fiirin balse hadda uu doonayo in uu dib u soo bilaabo wada-hadalo cusub.
Wada-hadallada Soomaaliland iyo Dowladda Federalka ayaa waxaa ay hakad ku jiraan tan iyo sanadkii 2014, iyada oo dhowr mar ay fashilmeen kulamo la doonayey in lagu wada hadal-siiyo.
Itoobiya oo Ciidamo farabadan soo dhoobtay xadka Soomaaliya